Sida loo duubo wicitaanada fiidiyowga kooxdaada | Wararka Gadget
Sida loo duubo wicitaanada fiidiyowga kooxdaada
Waqtigan xaadirka ah waxaan sameyn karnaa tirada ugu badan ee wicitaanada fiidiyowga tan iyo markii ay jiraan. Hadday tahay shaqo, saaxiibbo, qoys ama wixii la mid ah, wicitaannada fiidiyowga ayaa dad aad muhiim ugu noqday. Fayraska 'coronavirus' wuxuu keenayaa isticmaalka wicitaanadan fiidiyowga ah inuu si weyn u kordho oo shirarka shaqada ama xitaa daqiiqadahaas loogu dabaaldegayo dhalashada saaxiib, xubin qoys, iwm. waxaan rabnaa inaan duubo.
Hagaag maanta waxaan arki doonaa sida aad u samayn karto duubista wicitaanada fiidiyowga qaarkood ee aan ku sameyno codsiyada kala duwan ee aan haysanno ama xitaa FaceTime, haa, waad duubi kartaa wicitaanada fiidiyaha ee laga sameeyay Skype, Zoom, WhatsApp ama xitaa Google Meet. Marka la soo koobo, waxaa jira adeegyo badan oo la heli karo hadda si loo sameeyo wicitaannadan fiidiyowga ah wax kasta oo ay yihiin iyo in la awoodo in la duubo.
1 Waxaan ku bilaabi doonnaa adoo ku duubaya macruufka FaceTime
2 Ku duub wicitaan fiidiyoow Google Meet
3 Wicitaanada fiidiyowga ayaa lagu duubay Zoom
4 Duub wicitaanada fiidiyowga ee Skype
Waxaan ku bilaabi doonnaa adoo ku duubaya macruufka FaceTime
Haa, Apple muddo dheer kahor wuxuu kudaray ikhtiyaarka kumbuyuutarka si aad uqorto shaashadda laakiin shaqadani ma ogola in duubista codka sidaa darteed waa inaan qabanaa isticmaal Mac marka lagu daro iPhone ama iPad laftiisa iyada oo loo marayo fiilada hillaaca. Si loo sameeyo duubista wajigan FaceTime waa inaan si fudud ku xirnaa USB-ga Mac-ga oo aan raacnaa talaabooyinka:
Fur codsiga QuickTime
Guji Faylka ka dibna Duubista Cusub
Waqtigan xaadirka ah waxaan dooranaynaa iPhone ama iPad qaybta Kamaradda
Hadda waxaan si fudud u gujineynaa badhanka guduudan wicitaankuna wuxuu bilaabi doonaa duubitaan
Xulashadani waxay ku darsanaysaa Mac oo haddii aad rabto xitaa way kari karaan toos uga duub wicitaan WhatsApp ama codsi kasta oo kale oo aan ku isticmaalno qalabkeenna macruufka oo leh isla qaabkan. Mac-du waxay qaban doontaa wax walba oo ay ku jiraan codka wicitaanka fiidiyaha sidaa darteed markii la duubo waxaan si fudud u qasban nahay inaan keydinno clip-ka waana taas.
Ku duub wicitaan fiidiyoow Google Meet
Adeegga Google Meet wuxuu oggol yahay duubista wicitaannadan fiidiyowga ah laakiin bilaash ma ahan. Hawshani waxay toos ugu xirnaan doontaa adeegyada G Suite Enterprise y G Suite Enterprise ee Waxbarashada Marka waxaa macquul ah in inbadan oo idinka mid ah ay ikhtiyaar ikhtiyaari ah u haystaan ​​oo tanina idiinma shaqeyn doonto.
Laakiin kuwa haya adeeg lacag leh, waxay duubi karaan wicitaanada si toos ah iyagoo raacaya talaabooyinkan. Way fududahay oo xaaladdan markaan furaneyno PC ama Mac waxaan bilaabi doonnaa casharka ka dibna waxaan ku biiri doonnaa wicitaanka fiidiyowga oo waxaan raaci doonaa tallaabooyinka.
Waxaan gujin doonnaa liiska 'More', oo ah saddexda qodob ee taagan
Xulashada Duubista kulanka ayaa soo muuqan doonta
Guji dushiisa oo waxaan bilaabi doonnaa duubis
Dhamaadka waxaan gujinaynaa Jooji duubista
Marka aad dhameyso faylka waa la keydin doonaa Google Drive-ka gudaha galka Kulan. Xaaladdan oo kale iyo sidaan bilowgiiba ku sheegnayba, waxaa suurtagal ah in adeegani uusan ka muuqan liiska xulashooyinkaaga tanina waa sababta oo ah maamulka laftiisa ayaa duubay xaddiditaanno ama annagu toos uma lihin adeeggan oo u gaar ah G Suite Enterprise iyo G Suite Enterprise ee waxbarashada.
Wicitaanada fiidiyowga ayaa lagu duubay Zoom
Zoom waa qalabka ugu isticmaalka badan dhibaatadan Covid-19. Shaki la'aan, dhibaatooyinka xagga amniga ee ay haysteen bilowgii waxay umuuqdaan in laxaliyay oo Zoom wuxuu kusii kordhayaa adeegsadayaasha ayaamahaba. Xaaladdan oo kale, duubista wicitaanka fiidiyowga ee Zoom waxaa si toos ah loogu kaydiyaa kombiyuutarkeena, ma jiro adeeg daruur oo bilaash ah sidaa darteed waa duubista maxalliga ah dhammaan xisaabaadka bilaashka ah sidaa darteed waxay lagama maarmaan noqon doontaa in la iska bixiyo haddii aad rabto duubistaada wicitaan fiidiyoow ah in lagu kaydiyo daruuraha.
Si loo duubo Zoom waa inaan sidoo kale eegnaa xulashooyinka qaabeynta qalabka oo aan raacno dhowr tallaabo oo fudud. Xaaladdan oo kale, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la hawlgeliyo hawsha tanna waannu ku riixi doonnaa Dejinta Koontada ku saabsan ikhtiyaarka Duubista hadhowna waxaan gujin doonaa ikhtiyaarka Duubista deegaanka.
Hadda waxaan bilaabaynaa wicitaanka fiidiyowga
Guji xulashada Gubashada
Waxaan dooranaynaa xulashada duubista Maxalliga ah
Marka aan dhammeyno waxaan joojineynaa duubista
Dukumintiga kaydsan waxaa laga heli karaa Fogee faylka gudaha kombuyutarkaaga ama Mac-gaaga.Faylkan wuxuu kujiraa galka Dukumiintiyada waxaadna awoodi doontaa inaad ka daawato duubista qaab Mp4 ama M4A oo ciyaaryahan walba ah.
Duub wicitaanada fiidiyowga ee Skype
Ugu dambeyntii mid ka mid ah aaladaha ugu caansan ee loogu talagalay kuwa horeyba u isticmaalay wicitaanada fiidiyowga kahor intaanay soo ifbixin in adeegyadan ay soo gaareen, Skype. Xaaladdan oo kale, barnaamijka casriga ah ayaa sidoo kale noo oggolaanaya inaan si toos ah u duubno wicitaanka fiidiyowga waana inaan si fudud u riixnaa xulashada «Bilow duubista»Waxaa laga helay Dejinta xaga sare.
Waa wax fudud oo dhakhso ah oo cajaladaha ayaa si toos ah loogu kaydiyaa taariikhdeena wada sheekaysiga muddo 30 maalmood ah, ka dib wakhtigan duubista waa la tirtiray toos ah. Laga soo bilaabo PC ama Mac waa isku mid, waa inaan si fudud u gujino goobaha oo aan gujino bilowga duubista.
Sida aad u arki karto ku dhowaad dhammaan kiisaska codsiyada laftoodu waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay ku duubaan wicitaanka fiidiyowga. Helitaanka xulashooyinka loogu talagalay waa wax fudud oo aan u malaynaynin wax dhibaato ah marka laga reebo arrinta iOS leh FaceTime oo u baahan Mac si loo duubo wicitaannada fiidiyowga.
Waxaa muhiim ah in la yiraahdo codsiyada badankood waxay muujinayaan wakhti kasta in wicitaanka fiidiyowga la duubayo, laakiin marka laga hadlayo macruufka leh FaceTime uma muuqato. Waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin in marka la eego ogolaanshaha asturnaanta dadka loo baahan yahay in la sameeyo ama lala wadaago diiwaannadaas iyo in tan dalkeennu ay leedahay sharciyo xadidan oo xadidan. Xogtaan waa inaan la wadaagin ogolaanshaha hore ee dhamaan kaqeybgalayaasha wicitaanka fiidiyowga maxaa yeelay way dhaqmi kartaa dhibaatooyinka sharciga ee arrimaha asturnaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sida loo duubo wicitaanada fiidiyowga kooxdaada
Waxaad hadda kala soo bixi kartaa GTA 5 gebi ahaanba bilaash ah
Khiyaamo si loo habeeyo Gmail oo aad uga faa iideysato